हाम्रो विचार Archives - Page 10 of 10 - Samudrapari.com
आमूल परिवर्तनको प्रतीक बनोस् ‘शासकीय प्रणाली’
नेपालमा संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको म्याद तीन पटक थपिसकेपछि बल्ल राज्यको सासकीय स्वरुपजस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषयमा बहस शुरु भएको छ । वास्तवमा संविधान निर्माणका सन्दर्भ मात्रै नभएर नेपालमा राजतन्त्रको एउटा युगको अन्त्य भएर सार्वभौम जनताका तर्फबाट समृद्ध र शान्त नेपालको खाका समेत कोरिने गरी तयार गर्न लागिएको संविधानमा सबैभन्दा पहिले र धेरै अगाडिदेखि शासकीय स्वरुपका विषयमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी थियो । ढिलै भए पनि अहिले यो बहस नेपालका पत्र–पत्रिकाहरुमार्फत संविधानसभा र पार्टीहरुको घेरा...
सम्झनयोग्य वर्ष बनोस् २०१२
२०१२ ले हामी सबैलाई स्वागत गरिसकेको छ । हामी नेपालीहरुको क्यालेण्डर फरक हुँदा हुँदै पनि संसारका अधिकांश देशहरुमा अंगिकार गरिएको इस्वी संवतबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन । संसारका विभिन्न देशमा फैलिएका करिब ३० लाख नेपाली यही इस्वी संवतको क्यालेन्डरका भरमा दैनिकी चलाइरहेका छौं । जापान पनि यसबाट अछुत छैन । जापानबासी हामी नेपालीहरु नयाँ वर्षको रमाइलो कल्पना गर्दै वितेको एक वर्षको समीक्षा गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । जापानमा बस्ने हामी नेपाली समुदायका लागि र समग्रमा नेपाल र नेपालीका लागि २०११ कस्तो र...
२०११ साललाई फर्केर हेर्दा
ई.सं. २०११ हामीबाट बिदा हुन गईरहेको छ । विदाइको डिलमा उभिएको यो वर्षको आ–आफ्नै ढंगले समिक्षा शुरु भएको छ । खासगरी जापानस्थित नेपाली समुदायका लागि २०११ कति फलदायी वा निराशाजनक रह्यो, त्यसको लेखाजोखा व्यक्ति–व्यक्तिमा गएर केलाउन सम्भव छैन । तर समग्रमा २०११ के कस्तो रह्यो केलाउनु भने जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्र गएको वर्षमा गर्न चाहेर पनि पूरा हुन नसकेका कामहरु आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ अनि व्यक्तिगत वा संस्थागतरुपमा भएका गल्ति कमीकमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । २०११ सिंगो...
विवादित विषयहरुलाई छिटो टुंग्याउनु जरुरी
संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक भनेर छ महिना थप गरी आगामी जेठ १४ गते सम्म पुर्‍याईएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि आजसम्मको काम कार्बाहीलाई हेर्ने हो भने अरु छ महिनाभित्रै कसरी शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर संविधानको घोषणा हुन सक्ला भन्ने आशंका हुनु अस्वभाविक छैन । त्यसकारण पनि मुलुकको राजनीतिक भविष्य कतातिर डोरिन्छ भन्ने कुरा आम चासोको विषय भएको छ । राज्यको पुनर्संरचनाबारेका बहसहरुले तीन वर्षको अन्तरालमा पनि कुनै ठोस गति र आकार लिएका छैनन् । मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित गर्ने ग...
ईतिहासको अग्नीपरीक्षामा प्रम डा. भट्टराई
समकालिन प्रधानमन्त्रीहरुमध्य सर्बाधिक लोकप्रियता कमाएका र अपेक्षा गरिएका डा. बाबुराम भट्टराई पछिल्लो चरणमा केहि निर्णयहरुका कारण विवादमा तानिएका छन् । उनले भारत भ्रमणकाक्रममा गरेका विप्पा सम्झौता, सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेलको आममाफी प्रकरण हुँदै जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको भन्दै बिरोधीहरु उनलाई कमजोर र असफल बनाउने खेलमा उत्रिएका छन् । अहिले आफ्नै दलभित्रको एउटा खेमा र प्रतिपक्षको कडा आलोचनाका पात्र बनेका डा. भट्टराई सत्तास्वार्थका लागि लालायित बनेर मुलुकको अहित हुने काम गर्लान् भनेर धेरैले पत्याउन...
प्रकृतिको सुन्दर बान्कीमा सजिएको हाम्रो देश नेपाल, नागबेली परेका छङछङ बग्ने नदिनालाहरु, बिहान उठ्नासाथ सूर्योदयको पहेंलपूर किरणसंगै मनै लोभ्याउने मुस्कान छरिरहेका हिमश्रृँखलाहरु, हरियाली डाँडाकाँडा, समथर फाँटहरुमा तरेली परेका मनमोहक खेतीबाली अनि चराचुरुङ्गीहरुको चिरबिर चिरबिरसंगै शुरु हुने नेपाली जनजीवनका दैनिकी, साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । धन्य छौं हामी नेपालीहरु, हामीलाई प्रकृतिले सबैचीज दिएको छ । हामीमा भएका यी अलौकिक सुन्दरतालाई नजिकबाट छाम्न र हेर्न संसारभरिका मानिसहरु बर्षेनी लाखौं खर्च गरेर न...
नेपालीहरुको राष्ट्रिय चाड दशैं
नेपालीहरुको महान चाड दशैं हाम्रो सामु आएको छ । नेपालीहरुका चाड थुप्रै भए पनि दशैंको विशेष महत्व रहने गरेको छ । दशैंका आफ़्नै धार्मिक र सामाजिक महत्व रहेकाले पनि यो चाड परापर्वकालदेखि अरु चाडका तुलनामा महान चाड बन्न पुगेको हो । यस चाडसंग विभिन्न कथाहरु पनि जोडिएका छन् । सत्य युगमा भगवान रामले राक्षस रावणको बध गरेको उत्सवका रुपमा यसलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसैगरी दूर्ग माताले असुरहरुको नाश गरी देवताहरुको रक्षा गरेकाले त्यसैको उपलक्ष्यमा मनाइदैं आएको खुसियाली नै चाडको रुपमा परिणत भएको कथा धार...